Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း)
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အာရုံစူးစိုက်မှုချို့တဲ့တက်ကြွလွန်းခြင်းရောဂါ ကိုကုသရာမှာသုံးပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်းသဘာဝအတိုင်းရနိုင်တဲ့ ပမာဏကိုပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဗဟိုအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆေးအမျိုးအစားမှာပါပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း ဓါတုပစ္စည်းတွေကိုသက်ရောက်မှုရှိပြီး အရမ်းတက်ကြွစေတဲ့ အာရုံကြောတွေကို လည်း သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အာရုံတစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်စူးစိုက်ထားနိုင်ခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဿနာများထိန်းချုပ်ပေးခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါ်တယ်။
သင့်ရဲ့တာဝန်တွေကိုစီမံရာမှာနဲ့ နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့လည်း အကူအညီပေးပါတယ်။
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း အစာမပါဘဲသို့အစာနဲ့တွပြီး သောက်သင့်ပါတယ။် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်မနက်ပိုင်းမှာ သောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းအသုံးပြုခြင်းက အိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးစွဲခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခြားလူတွေနဲ့ အထူးသြဖ်င့် ဆေးစွဲဖူးတဲ့လူတွေနဲ့ အတူမျှဝေသုံးစွဲခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူ။ ရောင်းချခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းက တရားမဝင်ပါဘူး။
မသင့်မတင့်သုံးစွဲခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်းနဲ့ နှလုံးအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမှုန့်ပါအရည်ပုံစံတွေအတွက် ပုလင်းကိုတိုင်းတာမှုမစခင် သေချာခါသင့်ပါတယ်။ တိုင်းတာတဲ့ဆေးထိုးပြွန်တွေ၊ ဇွန်း၊ ခွက်အသုံးပြုပြိး အရည်ဆေးကိုတိုင်းတာသင့်ပါတယ်။ မရှိဘူးဆိုရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူဆီမှာ မေးနိုင်ပါတယ်။
ခံတွင်းအတွင်းမှာပင် ပါဝင်ပစ္စည်းများထုတ်ပေးသော ဆေးပြားများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်
သင်အသုံးမပြုခင်အထိ သေချာထုပ်ပိုးထားပါ။ ပိတ်ထားတာကိုဖွင့်ပြီး ပိတ်ထားတဲ့သတ္တုပြားကို ခွာပါ။ သတ္တုပြားတစ်လျှောက် ဆေးပြားကိုမတွန်းပါနဲ့။ သင့်ဆေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးသွားစေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးကိုဖယ်ထုတ်ဖို့နဲ့ ပါးစပ်ထဲထည့်ဖို့ ခြောက်သွေ့တဲ့လက်များကိုအသုံးပြုပါ။
ဆေးပြားတစ်ပြားလုံးကို မမျိုချသင့်ပါဘူး။ ဝါးစားခြင်းမပြုဘဲ ပါးဝပ်ထဲမှာပျော်ဝင်သွားတဲ့အထိထားပါ။ ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် ပျော်ဝင်သွားတဲ့ဆေးပြားတွေကို မျိုချဖို့ ရေသောက်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုနေစဉ်မှာ သင့်အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိမရှိ သင့်ဆရာဝန်ကပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပေးနေသင့်ပါတယ်။ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ အရပ်အမြင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တွေကိုလည်း မကြာခဏတိုင်းတာဖို့လိုပါတယ်။
ဆေးပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုအချို့မှာ ထူးဆန်းတဲ့ရလဒ်တွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးအသုံးပြုနေကြောင်း သင့်ကိုကုသတဲ့မည်သည့်ဆရာဝန်ကိုမဆို ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
amphetamine သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
သိုင်းရွိုက်အကျိတ်များဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် လွန်လွန်ကဲကဲတက်ကြွခြင်း၊ တင်းအားများခြင်း၊ အပြင်းအထန်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်း၊ ( ဒီလက္ခဏာတွေက်ု ပိုဆိုးစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစားစားလိုစိတ်မရှိခြင်း
သင့်မှာ အောက်ပါလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးရပ်လိုက်ပြီးဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ လစ်ဟာဟာဖြစ်ခြင်း
မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ ထူးဆန်းတဲ့အတွေးများ၊ သံသယလွန်ကဲခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြ်စ်ခြင်း
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း
ကိုယ်တွင်းဆီရိုတိုနင်များလွန်းခြင်း- ရန်လိုခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ တုန့်ပြန်မှုများလွန်ကဲခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျခြင်း၊ ဖျော့တော့ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဒါတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်းတွေကို ဆရာဝန်တွေဆေးဝါးတတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေကိုပြော ပြထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးရပ်လိုက်တာမျိုးတွေဆေးစသောက်တာမျိုးတွေ ဆေးပမာဏပြောင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ MAO inhibitorsတွေနဲ့တွဲအသုံးပြုခြင်းက ပြင်းထန်တဲံသေစေနိုင်လောက်တဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ amphetamineသုံးကုသနေစဉ်အတွင်း MAO inhibitorsတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏ- 10 mgသောက်ဆေး အကြိမ်ခွဲပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုရတဲ့အထိ အပတ်စဉ်10 mgထိတိုးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပမာဏ-5mgသောက်ဆေး အစာမစားခင်မိနစ၃၀မှ၆၀အလို
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- 30 mgသောက်ဆေး အကြိမ်ရေခွဲပြီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏ-5mgသောက်ဆေး အကြိမ်ရေခွဲပြီး
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုရတဲ့အထိ အပတ်စဉ်5 mgထိတိုးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပမာဏ-5mgသောက်ဆေး အစာမစားခင်မိနစ်၃၀မှ ၆၀ကြိုပြီး
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- 30 mgသောက်ဆေး အကြိမ်ေရေခွဲပြီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုရတဲ့အထိ နေ့စဉ်ပမာဏ2.5mgထိ အပတ်တိုင်းတိုးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပမာဏ-5 mgသောက်ဆေးတစ်နေ့ ၁ကြိမ်သို့၂ကြိမ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုရတဲ့အထိ နေ့စဉ်ပမာဏ 5mgထိ အပတ်တိုင်းတိုးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- အရမ်းရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွက်သာ 40 mgထက်ပိုလိုနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပမာဏ- 2.5 or5mgသောက်ဆေး မနက်တစ်ကြိမ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- သင့်တော်တဲ့တုန့်ပြန်မှုရတဲ့အထိ နေ့စဉ်ပမာဏ5to 10 mg ထိ ၄ရက်ကနေရရက်တိုင်းတိုးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- 20 mgသောက်ဆေး
Amphetamine (အန်ဖက်တမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေး့ပြား5mg; 10 mg; 2.5 mg/mL; 3.1 mg; 6.3 mg; 9.4 mg; 12.5 mg; 15.7 mg; 18.8 mg
Amphetamine. https://www.drugs.com/amphetamine.html. Accessed July 31, 2017
Amphetamine. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-170275-1753/amphetamine-oral/amphetamine-extended-release-disintegrating-oral/details#uses. Accessed July 31, 2017